1200 qaxooti Soomaali ah oo maanta ka degay dekedda Boosaaso – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
A warsame 26 April 2015
Mareeg.com: Dooni rakaab ah oo sidday ilaa 1,200 oo qaxooti Soomaali ah oo kasoo cararay dalka Yemen ayaa maanta kusoo xiratay dekedda Boosaaso ee gobolka Bari.
Dadka la socday doontaan ayaa isugu jiray rag, dumar, carruur, dhalinyaro iyo dad da’ah, waxaana ay u badnaayeen caruur iyo dumar.
Maamulka gobalka Bari iyo hay’ado samafal ayaa tegay dekedda magaalada Boosaaso si ay dadkaasu uga horgeeyaan biyo, cunto iyo daawo.
Dadkaan ayaa kasoo qaxay magaalada Sanca ee xarrunta dalka Yemen, halkaasoo ay heystaan falaagada Shiicada, islamarkaana Isbaheysiga Sacuudigu ay duqeyn ka geystaan.
Qaar ka mid ah dadka la socday doonta oo la hadlay warbaahinta ayaa sheegay in qaar ka mid ah carruurtooda ay kaga soo carareen dalka Yemen, kadib markii ay kala go’doomeen ilaa iyo hadana aysan ka warheyn nolol iyo geeri waxa ay ku sugan yihiin.
Duqa degmada Bosaso, Xasan Cabdalla Xasan oo saxaafadda kula hadlay gudaha dekadda ayaa sheegay in qaxootigan loo gudbin doono xaurmo loogu tala galay ilaa laga gaarsiinayo goobihii ay ku wajahnaayeen.
Xasan Cabdalla Xasan ayaa xusay in inta badan dadka la socday doonta maanta tiumid ay ka soo jeedaan deeganada Somaliland iyo Koonfurta Soomaaliya.
Todobaadyadii lasoo dhaafay waxaa dekedda Boosaaso soo gaarayey doonyo sida qaxooti Soomaali ah oo kasoo laabanaya dalka Yemen, kadib markii dalkii ay sanidihii dhawaa ku noolaayeen uu u burburay sida Soomaaliya oo kale.
Waxaa la filaya in maalmaha soo socda doonyo kale kasoo shiraacdaan dekedda Mukalla ee dalka Yemen, halkaas ah goobta ay kasoo dhoofaan Soomaalida kasoo cararaya dalka Yemen.